May 11, 2021 by aminawehelie
Talaado 11st May, 2021- Gaza- Sida ay soo werinayaan warbaahinta caalamka ee kala duwani, afar iyo labaatan qof oo Falastiin u dhashay iyo 2 Isaa’raaiil u dhashay ayaa ku dhintay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee ay fooda is dareen, falastiiniyiin deggan Gaza iyo ciidamada Israa’iil.
Rabshadahaan ayaa socday si aan halkad lahayn, tan iyo qorax-dhicii maalintii Isniintii, dadka dhintay waxaa ka mid ah caruur, halka dadka dhaawacmayna ay tiro badan yihiin.
Laba maalmood oo xiriir ah ayaa rabshado dhiig ku daatay ka aloosan yihiin, magaalada Gaza, kooxda Hamaas oo maamulka gudaha maagaalada Gaza, ayaa iyaguna gantaalo ku riday Qudus (Jerusalem) markii ugu horeysay muddo todoba sanadood ah.
Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegaya in todoba xubnood oo qoys qur ah ka wada tirsanaa, ay ku dhinteen qarax, halka 3 ka mid ah xubnaha qoska dhintay ay caruur ahaayeen, waxey intaas ku dareen in aan la hubin in mashqadaasi uu sababay gantaal ay cidamada Israa’iil tuureen, xilligaas mar u dhoweyd.
Ciidamada Israa’iil ayaa sheegaya in ay dileen, shan iyo toban xubnood oo ka tirsanaa dagaalyahaniinta Xamaas oo uuna ku jiro hal taliye.
Todobaadyadii ugu dambeeyeyba, waxaa aad i sii kordhayey qalalaase u dhaxeeyey, ciidmada Israa’iil oo muddo ka badan nus-qarni halkaa xoog ku heysta iyo Falastiiniyiinta deggan Gaza oo noloshu ku adag tahay, heysashada darteed.
Sources: Different media outlets
Previous Sarkaalkii ugu horeeyey oo Booliska Biritan ayaa lagu helay argagixisanimo.
Next Uk oo laga baqayo kicin seddexaad oo xanuunka Coronavirus ah: